PEAR SAMARA BEAUTY: SAWIRADA, SHARAXAADDA NOOCYO KALA DUWAN IYO FARSAMOOYINKA BEERAHA - BEERTA
Cunto kala duwan oo loogu talagalay taranta warshadaha - Samara Beauty pear
Reerka Ruushka ee la shaqeeya dalagyada pear ee sanooyinka ka dib ayaa abuuray qoysas firfircoon oo kala duwan oo noocyo kala duwan oo loo yaqaan pear-gears.
Halkan iyo "Forest Beauty", "Michurinsk Beauty", iyo "quruxda Ruushka", iyo noocyada kale ee la midka ah, inta badan tilmaamaya meesha dhalashada iyo koritaanka.
Kalluunka maahan meesha ugu dambaysa ee kooxdan. "Samara Beauty", sharaxaad iyo sawir oo aad ka heli doonto hoos.
Waxay u muuqataa in ay soo koobtay xukunka "macnaha dahabka" - marka laga reebo, dalaggu ma aha mid si xamaasad leh u sugaya in la sugo caleenta miro-dhalis ah, iyo dhinaca kale, warshadu waxay haysataa wakhti ku filan oo ay ku helaan waqti ay ku quudiyaan kuleylka xagaaga kuleylka ah iyo roobab culus ee bisha August.
Waa maxay nooca isteroberi ee loola jeedo?
Iyadoo ku saleysan precocity, kaas oo go'aamiya mudada saxda ah ee Bisaylkiisa miro, pear "Samara Beauty" ayaa leh qaybta dayrta hore miraha miraha.
Sida caadiga ah, qaan-saaridda ka saaran ee midhaha nooc ka mid ah waxaa laga helaa (ka soo horjeedka soo-saarka geedka dambe iyo ubax dambe) qeybtii hore ee Sebtembar.
Noocyada xilliga dayrta waxaa ka mid ah Svetlyanka, Svarog, Otradnenskaya, Pamyati Yakovleva iyo Tema.
Ka dib goosashada miro waxaa lagu keydin karaa meel qabow oo qallalan oo aan ka badneyn bil. Marka laga hadlayo nolosha sarrifka isteroberi ayaa si weyn uga sii dari kara.
Sida for hore ee geedka, taas oo ah, da'da ah ee geedka soo galitaanka fir fircoon firfircoon, noocyo kala duwan "Samara Beauty" waa dhaqan miro dhexdhexaad ah.
Marka la eego "baasaboorka noolaha," marka ugu horeysa ama ka yara degan iyo Wax-soo-saarka muhiimka ah waxay bixisaa 5-6 sano ee nolosheeda (iyo ma aha ka dib markii laga beerto sapling).
Ka dib marka la gaaro geedaha da'da ee la cayimay xaaladaha cimilada ee wanaagsan iyo daryeel ku filan waxay miraha miraha ka soo saartaa heerka warshadaha sanad walba.
Noocyada Xasuusta ee Jegallal, Yakovlevskaya, Hera, Lada iyo Nursery ayaa sidoo kale keeni kara midho wanaagsan.
Noocyada kala duwan ee lagu caddeeyey halkan ayaa ku dhashay ee gobolka Wabiga dhexe. Waxaa la sameeyey iyada oo la tixgelinayo sifooyinka cimilada iyo agrotechnical qaybta of this Russia, taas oo, ra'yiga khubaro badan, waa ku habboon horumarinta firfircoon ee beerta.
Xulashada noocyo cusub ayaa waxaa fuliyey cilmi baarayaasha gobolka Machadka Cilmi-baarista ee Dhirta Beeraha iyo Dhirta Daawooyinka "Jiguli Gardens" (Gobolka Samara) S. Kedrin, A. Kuznetsov, T. Kedrin.
Si aad u hesho muuqaal cusub oo asalka ah pear ah, noocyo kala duwan oo isdabajoog ah ayaa si nidaamsan looga soo gudbay "Kuybyshev Golden" (Lammaane waalid - noocyo "Guul" iyo "Meelaha") oo leh pear "Macmacaan" (Lammaane waalid - Aleksandrovka iyo "Klapp Favorite").
Sanadkii 2006, noocyo kala duwan ayaa si rasmi ah loogu soo daray Diiwaanka Dawladda Varietal iyada oo la adeegsanayo goboleyn ee gobolka beeralayda Dhexe ee Volga (gobolka Samara).
Markaad ku beeraneysid "Pure Samara" ee gobolkaan, waxa ay dammaanad qaadayaan waxkasta oo ku habboon noocyada kala duwan. dhadhanka iyo heerka waxsoosaarka.
Gobalkan, noocyada kala duwan ee pear ee Cathedral, Krasnobokaya, Elena, Vernaya iyo Victoria ayaa si fiican u qabanaya.
Nooca sharaxaadda Samara Beauty
Kalluunka "Samara Beauty" wuxuu leeyahay qaababka kala duwan:
Guud ahaan qeexan celceliska ama ka sarreeya heerka cabbirka (Qaar ka mid ah khubarada ayaa tixgelinaya koritaanka dheer ee geedka iyada oo ay faa'ido u tahay).
Qofku sida caadiga ah wuxuu gaaraa xajmiga ugu sareeya mudada yar. Kaabashka geedku wuxuu daboolayaa jilif of hoon-cagaaran-cagaaran.
Crown, laamo. Geedka Saara quruxda kala duwan ayaa waqtigeeda ka dhigta taajka caleenta oo ah qaab wareegsan (badiyaa oval). Laanta ugu muhiimsan waxay ka soo baxaysaa jirridda xagal u dhow xagal quman.
Waxaa intaa dheer, kan weyn ee geedka wuxuu noqonayaa, laamuhu waxay noqdaan kuwo fara badan. In laamaha dhalinyarada, jilifka koowaad waa midabka cagaaran-cawl. Korea ma cabsanayo qorraxda adag.
Caleemaha. Caleemaha dheeraadka ah ee midabka caleemaha ama brownish-brownish ah ayaa lagu aasaasay geed. Iskuday, caleemo si xoogan u caleemo ah ayaa diiwaangashaday dabacsanaa daciif ah.
Caadi ahaan waxay ku yaalaan geed googo badan, oo kor u kaca. Sida caadiga ah, fruiting wax soo saar leh ayaa lagu arkay dulmiga iyo wiqlaha.
Leaves. Kobcin ka soo baxa burooyinkeeda, oo lagu tilmaamo qaar ka mid ah dhererka dhererka. Caleemaha la buufinayaa waxay helayaan iftiin cagaaran oo cagaaran. Jidhka xaashi dhexdhexaad ah ayaa la dheereeyey. Taariiqda xaashida xaashida xarkood ee xariiqda.
Inflorescences Ubaxa geedaha "Samara Beauty" waxaa lagu qiyaasay mar dambe.
Waxaa jira labada pears dhexe iyo waaweyn. On a geed weyn dadka miro soo jiidasho badanaa u bislaadaan celcelis ahaan miisaanka waa 140-190 g.
Si kastaba ha noqotee, waxaa la diiwaangeliyaa xaaladaha cimilada cimilada iyo xaaladaha cimilada miisaankeedu yahay ilaa 350 g Miraha waxay leeyihiin qaabka saxda ah ee "pear classic", ama "dhalo" ah "dhalo" ah.
"Samara Beauty" Asymmetry mararka qaarkood waa mid caan ku ah. Haddii inta lagu jiro xilliga goosashada a cufan, diirka dhumucdiisu waa midabka midab-huruu, ka dibna by waqtiga koriimada ugu dambeeya on on ay sawirka jaalaha ah si siman u jilicsan dabeecadda kala firdhinta casaan-cawlaan muuqan.
Meelo yaryar oo yaryar oo hooseeya oo midab-bunni ah ayaa si cad u muuqda maqaarka.
Isla mar ahaantaana saxarka pear this waxaa lagu kala soocay midab cad iyo raaxo badan. Iyadoo tan iyada Joogista ayaa mararka qaarkood noqon karta mid yar.
Galka saxarada ku dhexjirta buulka cagaarka, caleemaha cagaarka ah ee burka-caleemaha ah ayaa ku haray. Miraha ayaa ku sii deynaya jirida, oo yar yar.
Noocyada dhirta "Samara Beauty" way ka duwan tahay miro sanadeedka sanadlaha ah, laga bilaabo sannad-sannadeedka 5-6aad ee noloshiisa. Isla mar ahaan sanadkiiba pear waxay kordhisaa wax soo saarka.
Taabashadani waxay u oggolaataa inuu bannaanka u soo gooyo dalagyada wanaagsan. Gaar ahaan, marka loo eego tirakoobyada qallafsan, geedka noocyadaas ah ee sannadka 7aad ee nolosha ayaa muujin kara dhalid ilaa 30-35 kg oo ah wax soo saar miro ah oo laga sameeyay hal geed.
Oo dhismaha midhihiisa waa sida oo kale Wakhti dheer ayay ku hayaan badeecadooda soo jiidashada leh ("suuqa"). Sidaa darteed, sida caadiga ah, miraha midkoodna wax dhibaato ah kuma qabo hirgelinta silsiladaha dukaamada.
Isagoo ka hadlaya dhadhanka dhadhanka ah ee midhaha bislaaday, waxaa halkan lagu xusay ayaa macaan u leh macaan. Iyada oo ku xiran xaaladaha Biyaha, cayayaanka Samara Beauty waxay noqon kartaa mid wanaagsan ama ku qanacsan. Iyada oo ku saleysan miisaanka 5-dhibcood ee codsiyada dhadhanka ah ee miraha, tan dhaqanka waxaa lagu qiyaasay 3.8-4.1 dhibcood.
Dhadhamin aad u fiican ayaa sidoo kale lagu muujiyey by pears Moskvichka, Lel, Rogneda, Talgar Beauty iyo Fairy.
Kala duwanaanshuhu waa mid guud ahaan codsiyada wax ku ool ah. Miraha waxaa la cuni karaa labadaba cusbo oo la shaqeynayo (isku-baddel, ilaalin, marmalades, jellies, iwm.).
Faa'iidada kale ee "Samara Beauty" waa Heerka sare ee caabbinta barafowga. Si kastaba ha ahaatee, qeybaha kala duwan ee warshadda waxay si kala duwan u falcelinayaan qabow daran. Gaar ahaan oo leh hoos u dhac weyn oo heerkul ah illaa -35 ° C, burooyinka miro ayaa waxyeelleyn kara.
Guud ahaan, noocyada noocan ah waxaa loo isticmaali karaa si loo isticmaalo beeraha waaweyn ee loogu talagalay taranta soosaarka warshadaha.
Noocyada jiilaalka-adag leh waxaa ka mid ah isteroberi: Duchess, Tonkovetka, Skorospelka ka soo Michurinsk, Severyanka iyo Sverdlovchanka.
Ka hor inta aadan billaabin "Samara Beauty", waxaa lagama maarmaan ah in la doorto goobta saxda ah ee nabdoon ee ku saabsan seedling.
Mabda'a ugu weyn ee halkan, waa in la xasuusto - tayada ugu fiican ee miro kala duwan oo kala duwan mustaqbalka bixiyaan ciidda oo keliya oo leh wax badan oo carrada madow ah. Dhaqanka xun maahan inuu xidid iyo digaag.
Sida dhammaan dhaqamada kale ee kuleylka ah ee kuleylka ah, Samara Beauty waxay dalbanaysaa in goobta degelku noqoto Dabayl la'aan iyo inta badan iftiinka qorraxda.
Joogitaanka hooskii joogtada ah waxay keenaysaa xaqiiqda ah in miraha khudradda lumiyo sonkorta.
Intaa waxaa dheer, pear "Samara Beauty" uma dulqaadan karo carrada qoyan xad dhaafka ah. Haddii ay jirto halis noocaas ah oo aan loo marin karin si kasta, waa lagama maarmaan in la abaabulo qasab ka saarista qoyaanka xad-dhaafka ah ee ka soo baxa dhulka. Iska ilaali arrimahan si hubaal ah waxay u horseedi doontaa daciifin weyn oo dhirta, taasoo keeni karta dhimashadiisa.
Ka dib markii boos loo doortay, waxaa lagama maarmaan ah in la qodo daloolka soo degaya, qoto-dheer oo ah 1 m, iyo dhexroorka waa 60-70 cm. Waa mid aad u macquul ah in godadka la dejiyo toddobaad iyo badh ka hor intaan la dhicin. Ka dib markii la qodo ku daadi hoobiye nadiifa ah (2 koob oo kab u ah baaldi biyo ah).
Marka seedling la beeray, waxaa Qoorta xididka waa inay ka baxaan 5-6 cm dhulka. Haddii aan la haynin calaamadda la tilmaamay, geedka geedka iyo dib u soo saar. Haddii kale geedka ayaa ka bilaaban doona bilowga si qaldan.
Ka dib markii seedling ayaa jira, iyo xididdadiisa ayaa daboolay isku dar ah dhulka (dhulka laga soo saaro marka qodo ceelka dhulka + humus (2 baaldiyo), ciid (2 baaldiyo) iyo 1 koob oo superphosphate ah)Wareegga khaaska ah waa horay u buuxsantay biyo kala go'ay (2-3 baaldiyo).
Si looga hortago dilaaca aan loo baahnayn ee ciidda agagaarka geedka yar yar iyo luminta degdega ah ee qoyaanka, tan Meesha waxaa lagu daboolay lakabka 2-3 cm ee mulch oo ka kooban humus qalalan iyo dhadday.
Cabbiraadyada daryeelka caafimaad ee saxda ah waxaa ka mid ah: waraabinta si joogto ah ee geed (gaar ahaan xilliga xagaaga ee qalalan), loosening of pistille beerta, hordhaca u dhiganta Bacriminta organic iyo macdanta, manjooyin la dhintay iyo laamaha u baxda.
"Samara Beauty" uma baahnid wax tallaabooyin khaas ah oo ilaalin ah oo lagu sameeyo cimilada xilliga qaboobaha.
Kala duwanaanta noocaas ah ayaa iska leh dalagyadaas Dhab ahaan ma cabsiisaan cudurada waaweynkudhisan dhirta miraha.
Gaar ahaan, "Samara Beauty" waxay muujinaysaa Cadaadiska ugu wanaagsan ee cudurkan fungal sida, sida //selo.guru/ptitsa/bolezni-p/gribkovye/parsha.html caleen iyo miraha.
Haddii aan falanqeyno dhamaan sifooyinka aasaasiga ah ee kala duwan ee lagu sharraxay, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in "Samara Beauty" ay tahay raad dhab ah beeralayda ku hawlan horumarinta miro-soosaarka warshadaha.